Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. मुलुककै जेठो अस्पतालमा नै छैन कुरुवा कक्ष ! – Emountain TV
मुलुककै जेठो अस्पतालमा नै छैन कुरुवा कक्ष !
काठमाडौं, २३ पुस । ठूला अस्पतालहरुमा कुरुवा घर नहुँदा विरामीले सास्ती व्यहोर्दै आएका छन् । वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल जस्ता सरकारी स्तरमा संचालित ठूला अस्पतालमा कुरुवा घर नहुुँदा जिल्लाबाट आउने सामान्य परिवारका विरामी र कुरुवालाई अप्ठेरो पर्ने गरेको छ ।
नेपालका निजी तथा सर्वजनिक अस्पतालहरुले बिरामीहरुप्रति अझै सामाजिक जवाफदेहीता देखाउन सकेका छैनन् । यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो अस्पतालको फोहोर शौचालय र अभावयुक्त कुरुवा कक्ष । नेपालको अधिकांश ठाउँमा स्वास्थ्य सुबिधा नहुँदा दुर्गम ठाउँका बिरामीहरु उपचारका लागि काठमाडौं आउने गर्दछन् । तर बिरामी तथा कुरुवाहरुका लागि अस्पतालमा कुरुवा कक्षको व्यवस्था नहुँदा उपचार खर्च कोठा भाडामै सकिने गरेको छ ।
जसका कारण बिरामीहरुको उपचार भन्दा काठमाण्डौको बसाई नै समस्या बनेको छ । अझ बिरामीको हेरचाहमा आउने कूरुवाहरु सुरक्षित बासको अभावमा असुरक्षित बास बस्दा बिरामी हुने गरेका छन् । रामेछापका गण्ोश बहादुर माझीले कुरुवा कक्ष नहुँदा खुल्ला आकाशमुनि रात बिताउने गरेको बताउँछन् ।
दोलखाका रोहनी खडका एक महिनादेखि श्रीमान्को डाईलासिसका लागि काठमाडौं बस्दै आउनु भएको छ । उहाँ कुरुवा कक्ष नभएकै कारण कोठा भाडा गरेरै अस्पताल आउने जाने गरिरहनु भएको छ ।
सर्वसाधारण विरामीको उपचारको केन्द्र वीर अस्पताल हो । नेपालकै जेठो अस्पतालमा समेत विरामीका लागि कुरुवा घर छैन । कुरुवाहरुका लागि छुट्टै कक्ष निर्माण गर्नका लागि कुनै योजना नरहेको वीर अस्पतालका निर्देशक केदारप्रसाद सेन्चुरी बताउनु हुन्छ ।
दैनिक रुपमा देशभरीबाट करिब २२ देखि २३ सयको हाराहारीमा बिरामीहरु उपचारका लागि बीर अस्पताल आउने गरेका छन् । बिरामीहरुका चाप अनुसार बीर अस्पताले अहिले पनि सुरक्षित कक्ष पुर्‍याउन सकेको छैन् । बिरामीका उपचारमा हेरचाह गर्न आउने कुरुवाहरुका लागि कुरुवा कक्ष नहुदाँ कुरुवाहरु बिचल्लीमा परेका छन् ।
निःशुल्क बृहत् स्वास्थ्य शिविर
सरकारी अस्पतालमा शौचालयको कन्तविजोग
टेकुस्थित जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा रगत परीक्षण गराउनेकाे चाप
कान्ति बाल अस्पतालमा चालु वर्षको पुससम्म ७० हजार बालबालिकालाई ओपिडी सेवा
स्वास्थ्य सेवा नपुगेको स्थानमा सेनाको स्वास्थ्य शिविर
यशोधरा गाँउपालिकामा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न
दाङमा सिकलसेल एनिमियाको औषधी अभाव, भारतबाट ल्याएर खान बाध्य
नौ महिनामा पाँचपटक टाउकोको शल्यक्रिया गरेपछि बालक अशक्त
सबैतिरबाट आस मारेको बिरामी नर्भिक पुर्याएपछि
क्यान्सरलगायत रोगको परीक्षण गर्न दैनिक एक हजार नमुना भारततर्फ